काठमाडौंको स्वयम्भूबाट सोनाम तामाङ पक्राउ ! शङ्का लागेर चेकजाँच गर्दा प्रहरीनै चकित – Kavrepati
Home / समाचार / काठमाडौंको स्वयम्भूबाट सोनाम तामाङ पक्राउ ! शङ्का लागेर चेकजाँच गर्दा प्रहरीनै चकित
admin September 16, 2021	समाचार Leaveacomment 142 Views
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीले काठमाडौंबाट पेस्तोलसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । सशस्त्रको विशेष व्यूरो टोलीले बुधबार दिउँसो ४ः१० बजे काठमाडौं महानरपालिका–१६ स्थित सीतापाइलाबाट एक जनालाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा काठमाडौंस्थित तारकेश्वर नगरपालिका–३ जितपुर फेदीका २४ वर्षीय सोनाम तामाङ रहेका छन् । सीतापाइलाको रक चिल्ली रेस्टुरेन्टबाट अवैध रुपमा मेड इज जर्मनी लेखिएको लोडेल भरुवा पेस्तोल लिएर हिँडिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको हो ।
सो पेस्तोलमा लाग्ने पाँच राउन्ड गोली पनि सशस्त्र टोलीले पक्राउ गरेको छ । उनको साथबाट बा ४९ प ७५६५ नम्बरको मोटरसाइकल, एक थान मोवाइल र म्यागेजिन पनि बरामद गरेको हो । उनीमाथि थप अनुसन्धानका लागि सशस्त्र टोलीले स्वम्भूस्थित प्रहरी वृत्तमा बुझाएको छ ।
यस्तै, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्‍यूरोले बैंकिङ कसूर मुद्दाका फरार प्रतिवादीहरुलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा काठमाडौं महानगरपालिका-१४ बल्खु बस्‍ने ४८ वर्षीय प्रकाश श्रेष्ठ र काठमाडौं महानगरपालिका- २९ असन बस्‍ने ३६ वर्षीय बिनम श्रेष्ठ रहेका छन् ।
प्रकाशलाई रुपन्देहीबाट र बिनमलाई काठमाडौंको असनबाट पक्राउ गरेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले जनाएको छ । उनीहरुले आफ्नो खातामा पर्याप्त मौज्दात रकम नभएको जानीजानी झुक्यानमा पारी बैंक अफ काठमाण्डु र सिद्धार्थ बैकको चेक काटेर दिएका थिए । दुवैजनाले पीडितलाई आफ्नो खातामा पर्याप्त मौज्दात रकम नभएको भन्‍ने जानी जानी झुक्याएर बैंक अफ काठमाण्डु र सिद्धार्थ बैकका बिभिन्न रकमका चेकहरु आ-आफ्नो खाताबाट भुक्तान हुने गरी पीडितहरूलाई दिएका थिए।
Previous बिहे भएको ५ दिनमै टिकटक बनाउँ’दै गर्दा खोला’ले ब’गाए’पछि परिवारमा रु’वाबासी (भिडियो सहित)
Next १९ वर्षीय युवतीको टिकटक बनाउदा सेती नदिमा खसेर म त्यु भयो,भिडियोमा यस्तो दर्दनाक दृश्य देखियो (भिडियो हेर्नुस्)